कोरोनाभाइरस: कसरी निर्णय गर्ने कि तपाईंको बच्चाहरू स्कूलमा पछाडि जानु पर्छ - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कल्याण औषधि बनाम मित्र कम्पनी स्वास्थ्य मनोरञ्जन औषधि जानकारी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार प्रेस कम्पनी, चेकआउट
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> के तपाईंको बच्चाहरु COVID-19 को समयमा स्कूलमा फर्कनु पर्छ?
के तपाईंको बच्चाहरु COVID-19 को समयमा स्कूलमा फर्कनु पर्छ?
गर्मी अझै पनि देश भर मा प्रज्वलित छ, तर स्कूल-उमेर भएका बच्चाहरु का अभिभावक आसन्न स्कूल वर्ष मा अधिक केन्द्रित छन्।
चलिरहेको कोरोनाभाइरस महामारीका लागि धन्यवाद, यस वर्ष पछाडि स्कूल सीजन धेरै फरक देखिनेछ। र जताततै अभिभावकहरू कडा छनौटहरूको साथ कुश्ती गर्दैछन् जुन उनीहरूले आफ्ना बच्चाहरू र परिवारको शारीरिक सुरक्षा र भावनात्मक हितको लागि बनाउन पर्छ।
विद्यालय बन्द र कोरोनाभाइरस
कोरोनाभाइरसले देशभरि मानिसहरूलाई स to्क्रमित गर्न थाल्दा स्कूल बन्दहरू वसन्त wildतुमा ज wild्गल आगोको रूपमा फैलिए। धेरैजना स्कूलको बाँकी वर्ष बन्द रहे।
अब, महिना पछि, अमेरिकाले लगभग million मिलियन COVID-19 संक्रमण लग इन गर्यो, र नयाँ केसहरु धेरै राज्यहरूमा वृद्धि भइरहेको छ। नतिजाको रूपमा, धेरै स्कूल नेताहरू आफ्ना स्कूलहरू खोल्ने कि छैन भनेर चिन्तित छन्।
के यो विद्यालयहरू फेरि खोल्न सुरक्षित छ?
धेरैले अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्स (AAP) लाई निर्देशनका लागि हेरेका छन्।
विद्यालय पुन: खोल्ने योजनाहरू प्रत्येक समुदायको लागि फरक देखिनुपर्दछ AAP अनुसार। निर्णय COVID-19 संक्रमण दर र जोखिमबाट मानिसहरूलाई जोगाउने क्षमतामा आधारित हुनेछ।
बच्चाहरूको स्वस्थ विकास र कल्याणको लागि स्कूलमा फर्कनु महत्त्वपूर्ण छ, तर हामीले सबै विद्यार्थी, शिक्षक र स्टाफका लागि सुरक्षित हुने तरीकाले पुनः उद्घाटन गर्नै पर्छ, 'आप' ले भने संयुक्त बयान अमेरिकी शिक्षक संघ (एएफटी), राष्ट्रीय शिक्षा संघ (NEA), र स्कूल सुपरिटेन्डेन्ट एसोसिएशन (एएएसए) को साथ। विज्ञानले सुरक्षित विद्यालयहरू पुन: खोल्दा निर्णय लिनु पर्छ।
मैले कहिले राम्रो परिणाम को लागी भियग्रा लिनु पर्छ?
को रोग नियन्त्रण र रोकथाम (CDC) का लागि केन्द्रहरू कम समुदाय प्रसारणको क्षेत्रमा स्कूल खोल्न प्रोत्साहित गर्ने बयान पनि जारी गरेको छ। यसमा वेबसाइट , CDC ले आमा बुबा र हेरचाहकर्ताहरूको लागि मार्गदर्शन र उपकरण प्रदान गर्दछ।
के म लेभोथीरोक्सिन संग भिटामिन बी १२ लिन सक्छु?
धेरै स्कूल नेताहरू विश्वास गर्छन् कि उनीहरू सुरक्षित रूपमा अझै आफ्ना विद्यालयहरू खोल्न सक्दैनन् । फलस्वरूप, ती स्कूलहरूले अनलाइन - वा टाढाको शिक्षा — कार्यक्रमहरूको लागि छनौट गर्नेछन्। यसैबीच, अन्य विद्यालयहरूले व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि पुन: खोल्ने योजना गरिरहेका छन्, यद्यपि स्थानमा केही सुरक्षा सावधानीहरूको साथ। फेरि खोल्नका लागि बहस पनि भएको छ विभाजन गहिराई केही निजी र सार्वजनिक विद्यालयहरू बिच, निजी विद्यालयहरू कोरोनाभाइसको बखत पुन: खोल्ने योजना र ई-लर्निंगको लागि सार्वजनिक विद्यालयहरूको योजनाको बीच। केही विद्यालय र स्कूल जिल्लाहरूले अभिभावकलाई विकल्प छनौट गर्न दिइरहेकाछन् जुन उनीहरूको बच्चाको लागि सही हो। तर छनौट गर्न सजिलो छैन।
के तपाईंले आफ्नो बच्चालाई घरमा राख्नु हुन्छ?
धेरै अभिभावकहरू आफ्ना बच्चाहरूलाई स्कूलमा फिर्ता पठाउने कि अनलाइन रिमोट सिक्ने प्रोग्रामको लागि उनीहरूलाई घरमै राख्ने भनेर चिन्तित छन्। त्यहाँ छ केही प्रमाण त्यो रिमोट सिक्ने कम प्रभावकारी छ - विशेष गरी विद्यार्थीहरूको लागि जो सामाजिक आर्थिक हिसाबले वञ्चित छन् र संसाधनहरूमा पहुँच गर्दैनन्। रिमोट सिक्नको लागि समय र स्रोतहरू आवश्यक पर्दछ प्रत्येक परिवारको छैन। उल्लेख गर्न मिल्दैन, शिक्षक र साथीहरूसँग अनुहार कुराकानी बिना पूरै स्कूल वर्षको प्रभाव अज्ञात छ। उल्लेख गर्नु पर्दैन कि शिक्षकहरू र स्कूलहरू अनलाइन शिक्षणको लागि सुसज्जित वा प्रशिक्षित छैनन्।
छनौट अझ बढी भरपर्दो संग बच्चाहरूको आमा बुबा को लागी छ पुरानो स्वास्थ्य समस्याहरु वा विशेष आवश्यकताको साथ बस्ने ठाउँको आवश्यक पर्दछ जुन कक्षाको संरचनाको बाहिर प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
मेरी एलेन कोन्ली, बीएसएन, आरएन, पूर्व स्कूल नर्स र अस्थमा एण्ड एलर्जी फाउन्डेसन अफ अमेरिकन (एएएफए) का सामुदायिक सम्बन्ध समितिका अध्यक्षले वर्णन गरेकी आमाबुबाले यी चिन्ताहरूलाई तौलिरहेका छन्:
COVID-19 का लागि उच्च जोखिममा परिवारका सदस्यहरू
तिनीहरूका बच्चाहरूमा सामाजिक अलगावको सम्भावित प्रभाव
रिमोट सिक्ने समर्थन गर्न आमा बुबाको क्षमता
बच्चाको हेरचाह आवश्यकताहरूमा असर सहित अभिभावकको कामको स्थिति
यदि एक विद्यार्थीको एक प्रमुख अन्तर्निहित चिकित्सा अवस्था छ, वा यदि तिनीहरू अरूसँग सम्झौता गरिएको हुन सक्छ, तिनीहरू टाढाको शिक्षालाई एक सुरक्षित विकल्पको रूपमा विचार गर्न सक्दछन्, शोधकर्ता र एमडी, विलियम ली सुझाव दिन्छन्। रोगलाई पिट्नुहोस्: तपाईंको शरीरले कसरी यसलाई निको पार्न सक्छ भन्ने नयाँ विज्ञान । यो विकल्प तिनीहरूको चिकित्सक र स्कूल प्रशासन संग खुल्ला कुरा गर्नु पर्छ।
सम्बन्धित: के पुरानो रोग भएका मानिसहरू कोरोनाभाइरसको खतरामा छन्?
तपाईंको स्कूललाई ​​सोध्नु पर्ने प्रश्नहरू
तपाइँ आफ्ना बच्चाहरूलाई स्कूलमा पठाउने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्नु अघि (यदि व्यक्तिमा फर्केर जानु एक विकल्प हो), तपाइँको स्कूलको तयारी प्रयासहरू विचार गर्नुहोस्। कान्ले भन्छन्, प्रणालीहरू स्थापना गर्न स्कूलहरू जिम्मेवार हुन्छन् जहाँ सबै विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू र सहयोगी स्टाफहरूको लागि सुरक्षित र पोषण प्रशिक्षण वातावरण कायम गर्न सकिन्छ।
डा। लि भन्छन्, अभिभावकहरूले स्कूल प्रशासकहरूले कसरी सुरक्षित फिर्तीको लागि स्कूलको तयारी गरिरहेका छन् भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ। सोध्न विचार गर्नुहोस्:
विद्यार्थीहरूले स्कूल पुन: सुरू गर्नु अघि स्क्रीनिंग प्रक्रियाहरू के हुन्?
के यात्रा क्वारेन्टाइनहरू ठाउँमा छन्? COVID-19 परीक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, वा तापक्रम जाँचको बारेमा के हुन्छ?
दैनिक स्क्रीनिंग प्रक्रियाहरू के हुन्?
के त्यहाँ मास्क आवश्यकताहरू छन्?
कक्षा कोठाको लागि सामाजिक दूरी योजना के हो?
कसरी खाना उपलब्ध गराइनेछ र क्याफेटेरिया सिट गर्ने प्रबन्ध?
कोरोनाभाइरस र स्कूल खेलकुदको बारेमा के हुन्छ? जिम कक्षा वा स्कूल पछि खेलहरू रद्द हुनेछ?
कसरी लाकर कोठा, बाथरूम, कक्षा कोठा, र साझा सतहहरु सफा हुनेछ?
के स्कूल भवनहरूमा हवा सर्कुलेशन र भेन्टिलेसन प्रणाली पर्याप्त छ?
कुन सेवाहरू स्कूल नर्स, मार्गदर्शन सल्लाहकारहरू, इत्यादि उपलब्ध हुनेछ?
तपाईं आफ्नो स्कूललाई ​​उनीहरूको सम्भावित मध्य-सेमेस्टर स्कूल बन्द हुने र कोरोनाभाइरसको योजनाहरूको बारेमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ।
यदि विद्यार्थी वा शिक्षकले COVID-19 का लागि सकारात्मक परीक्षण गर्छन् भने के हुन्छ?
के हुन्छ यदि विद्यार्थी शरीर वा संकायको बीचमा एक प्रकोप छ?
त्यहाँ कोर्नाभाइरस रोगको कारण स्कूलहरू नजिक छ भने विद्यार्थीहरूले सिकाउनका लागि केहि तरिकाहरू छन्?
यदि तपाईंको बच्चाको स्कूलले रिमोट सिक्ने विकल्प प्रदान गर्दै छ भने, फेला पार्ने प्रयास गर्नुहोस्:
कुन पाठ्यक्रम प्रयोग गरिनेछ?
प्रविधि आवश्यकताहरु के हो?
तपाईंको बच्चाले कति समय अनलाइन खर्च गर्दछ?
रिमोट सिक्ने सुविधा कहिले उपलब्ध हुनेछ?
केही स्कूलहरूले विद्यार्थीहरूले एक निश्चित समय अवधि, जस्तै एक सेमेस्टर प्रतिबद्ध गर्न आवश्यक गर्दछ। स्कूलहरूले कोरोनाभाइरसको लागि कसरी तयारी गर्छन् भन्ने बारेमा थप जानकारीको लागि, रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रहरू (CDC) जाँच गर्नुहोस्, का लागि सिफारिसहरू नीति स्कूलहरूको ठाउँमा हुनुपर्दछ ।
तपाईंको छनौट बनाउँदै
अझै पक्का छैन कि तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँ कुनै सही उत्तर छैन, विज्ञहरू भन्छन्। यो गाह्रो अवस्था हो, र त्यहाँ सबै विकल्पहरूमा कमिहरू छन्। प्लस, को प्रभाव मा अनुसन्धान बच्चाहरूमा कोरोनाभाइरस अझै जारी छ।
CDC को वेबसाइट अभिभावक र केयरगिभर्सको लागि निर्णय गर्ने उपकरण छ जसले आमाबाबु र केयरगिभर्सको मनोवृत्ति, भर्चुअल / घर शिक्षा सम्भाव्यता, शैक्षिक र भावनात्मक भलाई, र स्कूलमा आधारित सेवाहरू निर्धारण प्रक्रियामा उनीहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ। राष्ट्रिय अभिभावक शिक्षक संघ धेरै शैक्षिक र स्वास्थ्य हेरफेर को प्रस्ताव संग एक टाउन हल आयोजना गर्नुभयो थप विचार र मार्गदर्शन ।
जबसम्म हामी यसलाई नियन्त्रणमा राख्दैनौं, यदि अभिभावकहरूले टाढाको सिकाई गर्न सक्छन् र उनीहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई सिकाउन सक्ने जुनसुकै कुरालाई पूरक बनाउन सक्छन्, त्यो नै सुरक्षित तरिका हो, जर्ज वाशिंगटनका क्लिनिकल इमरजेन्सी मेडिसिनका सहयोगी प्राध्यापक, रीपा मन्फ्रेदी भन्छिन्। विश्वविद्यालय अस्पताल। यो इष्टतम तरीका होइन। यो मेडिकल रूपमा सबैभन्दा सुरक्षित तरिका हो। तर हामीलाई थाहा छैन कि बच्चाहरूमा मनोवैज्ञानिक प्रभावहरू के हुनेछ।
काउन्टर विरोधी मतली औषधि भन्दा राम्रो
अभिभावक, विद्यार्थी, र शिक्षकहरूको लागि संसाधन:
यस बीचमा, कोरोनाभाइरसहरूको लागि यी स्कूल स्रोतहरू जाँच गर्न विचार गर्नुहोस्:
सीडीसी स्कूल को स्रोतहरू कोरोनाभाइरस
बाल रक्षा कोष को COVID-19 संकट संसाधन हब
राष्ट्रीय PTA को COVID-19 पीटीए स्रोतहरू
Safe Kids विश्वव्यापी
युएसडीए बच्चाहरूको लागि भोजन खोज्नुहोस्
उनीहरूले तपाईंलाई सुरक्षाको बारेमा उपयोगी थप जानकारी दिन सक्छन् यस असामान्य पछाडि-स्कूल वर्षको बखत।
कम पोटेशियम हुनुको मतलब के हो?
baclofen के रूप मा एक औषधि परीक्षण मा देखाउँछ?
cephalexin को लागी ब्रान्ड नाम के हो?
पेट खराब को लागी सबै भन्दा राम्रो औषधि के हो